बैंक खातामा रहेको नगद पनि किन लुकाए प्रचण्डले ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
बैंक खातामा रहेको नगद पनि किन लुकाए प्रचण्डले !
रहस्यको घेरामा प्रधानमन्त्री दाहालको सम्पत्ति
प्रधानमन्त्रीका लागि दिएको तलब र अरु भत्ता वाफतको पैसा पनि अहिलेसम्म करिव ६ लाख खातामा रहेका स्रोतको दावी छ । तर प्रधानमन्त्रीले बुधवार आफ्नो नगद विबरणमा छैन किन लेखे ?
सामान्यतया जति आम्दानी हुन्छ अथवा कमाई हुन्छ । त्यसकै आधारमा हरेक मान्छेको खर्च चलेको हुुन्छ । बैंकमा रहेको खाता र त्यसमा तलब वाफत मात्रै भएपनि जम्मा हुने नगद उसको सम्पत्ति हो । तर प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहालका हकमा भने त्यो लागुु भएको देखिएन ।
बुधवार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विबरणमा नगद नभएको विवरण पेश गरेका छन् । तर एभरेष्ट बैंकमा रहेको उनको सरकारी स्वामित्वको खातामा मात्रै केही लाख पैसा मौज्दात छ । सरकारले दिने तलब भत्ताको पैसा एभरेष्ट बैंकमा रहेको उनको खातामा जम्मा हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको लेखा शाखाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले दिएको अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले झिकेर ल्याउने गर्छ र उनको सचिवालयका कर्मचारीको तलब देखि अरु खर्चको जोहो गरिन्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भरेको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी फारम हेर्दा १० वर्ष पहिले पार्टीमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा मिल्दो जुल्दो छ । सुन बढेको छ जग्गा घटेको छ ।
पैसा अनुसारको भर्पाइ लेखामा नै बुुझाउने गरिन्छ । प्रधानमन्त्रीका लागि दिएको तलब र अरु भत्ता वाफतको पैसा पनि अहिलेसम्म करिव ६ लाख खातामा रहेका स्रोतको दावी छ । तर प्रधानमन्त्रीले बुधवार आफ्नो नगद विबरणमा छैन किन लेखे ? यसबाट उनले आफ्नो सम्पत्ति जतिसक्दो लुकाउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ । उनको लाजिम्पाटमा रहेको निवासको महिनाको भाडा मात्रै १ लाख ३० हजार अहिले पनि तिर्नु परिरहेको छ । त्यो पैसाको स्रोत के हो ? प्रचण्डले खुलाएको विवरणबाट पुष्टि हुने आधार देखिदैन ।
यात उनको हरेक खर्च–पर्च अरु कसैले बोहोरिरहेको छ वा उनको आफ्नो चल सम्पत्ति सबै लुकाएका छन् । के आफुसँग भएको सुनले मात्रै खान लगाउन, बस्न पुुग्छ ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भरेको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी फारम हेर्दा १० वर्ष पहिले पार्टीमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा मिल्दो जुल्दो छ । सुन बढेको छ जग्गा घटेको छ ।
त्यति बेला पनि उनले नगद नभएको र घर रघडेरी श्रीमतिसहितको एक कठ्ठा सात धुर (भरतपुर, चितवनमा रहेको र सुनचाँदी तथा गरगहना २ तोला सुन रहेको विवरण बुझाएका थिए । १० वर्षमा जग्गा केही घटेको बिबरणले देखाएको छ सुन एक तोला बढेको छ । यो दश बर्षमा उनले गरेको खर्चको तुलना गर्दा उनको आम्दानी त्यसै अनुसार हुनैपर्छ ।
प्रचण्डले आफुसँग भएको सम्पत्ति लुकाएर र औपचारीकताका लागि सम्पत्ति विवरण पेश गरेको प्रष्ट भन्न सकिन्छ । कहाँ र किन लुकाएर प्रचण्डले सम्पत्ति ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खोज्नुपर्छ ।
नभए उनको गुजारा कसरी चल्छ ? विना स्रोत उनको गुजारा चलिरहेको हो भने त्यसको स्रोतका विषयमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नभए उनले भ्रष्टाचार गरिरहेको प्रमाणित हुन्छ । दोस्रो संविधान चुनावमा मात्रै उनले हेलिकोप्टरमा करोडौ खर्च गरेको सञ्चार माध्यममा नै आएको हो ।
कहाँबाट ल्याइएको थियो त्यो पैसा ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पत्ति कम देखाएर सर्वहारा वर्गको नेता भएको देखाएर सहानुुभूूती बटुुल्न खोजेपनि उनको सम्पत्ति विवरणमाथि धेरैले प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले एक्लो छोरा प्रकाश दाहालसँगै रहेकाले उनीसँग भएको सम्पत्ति पनि प्रधानमन्त्रीको विवरणमा आउनुपर्ने हो । के प्रकाशसँग पनि चल, अचल सम्पत्ति सुक्को नै छैन ? विश्वास गर्न सकिदैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कम्युटर, मोवाईल छ । तर उनले त्यो पनि उल्लेख गरेका छैनन । पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाले मोवाई समेत सार्वजनिक गरेका थिए । प्रचण्डले आफुसँग भएको सम्पत्ति लुकाएर र औपचारीकताका लागि सम्पत्ति विवरण पेश गरेको प्रष्ट भन्न सकिन्छ । कहाँ र किन लुकाएर प्रचण्डले सम्पत्ति ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खोज्नुपर्छ ।